Fiantohana azo itokisana sy serivisy
Azo itokisana ny fahamendrehana sy ny serivisy
dingana amin'ny lalana. Mividiana amin'ny fahatokisana.
FIAROVANA MPIVAVY MAIMAIMPOANA
Vidio amin'ny fiadanan-tsaina ny famantaranandronao nofinofy
Miaro amin'ny sandoka sy ny replika isika.
Fiadanan-tsaina marina, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany
Fomba fiantsenana marani-tsaina kokoa
Ny famantaranandronao dia voamarin'ny ekipa manana mpanamarin-tena tsy miankina.
Ny famantaranandronao dia alefa mivantana avy amin'ny mpanamarina miaraka amin'ny fandefasana takiana sonia.
Tsy misy vidiny aminao
Watch Rapport dia manarona ny vola lany rehetra amin'ny fizotran'ny fanamarinana.
MITONDRA NY BIRAKO IZAO
Fanamarinana azo itokisana
Watch Rapport dia matotra amin'ny fividiananao. Manadihady, mandinika ary manamarina ny lisitra tsirairay izahay mba hiarovana amin'ny sandoka. Ny inspecteur an'ny fiambenanay dia manam-pahaizana ary manana traikefa mihoatra ny 100 taona.
Watch Rapport dia hamoaka taratasy fanamarinana ny maha-izy azy raha toa ka 100% tena izy ny zavatra azontsika avy amin'ny mpivarotra. Raha manana fisalasalana amin'ny fividiananao ianao dia avereno amin'ny alàlan'ny dingam-pandehanana "maimaim-poana" ary mahazoa famerenam-bola feno. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny politika fiverenanay dia tsindrio eto.
Ny antoka ho an'ny serivisy
Watch Rapport mino ny hatsaran'ny serivisy. Miezaka izahay mba hanome ny mpanjifanay kilasy maneran-tany fanampiana isaky ny dingana rehetra. Izahay dia mikendry ny hanana traikefa miantsena tsara sy mahomby.
Inona ny antoka azo itokisana amin'ny famantaranandro?
Watch Rapport's Authenticity Guarantee dia serivisy natao hanampiana ny mpividy hiantsena am-pahatokisana. Ireo mpanamarin-kevitra avy amin'ny antoko fahatelo dia mijery ara-batana ny entana rehetra alohan'ny handefasana azy ireo any amin'ny mpividy.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Garantie azo itokiana?
Mora izany! Mikaroha sy miantsena ny lisitr'i Watch Rapport miaraka amin'ny badge "Famaritana azo itokisana". Rehefa mividy entana ianao, ny mpivarotra dia mandefa ny entana mivantana any amin'ny mpamaritra antoko fahatelo. Ny mpanamarina dia hijery sy hanamarina tsara ny maha-azo itokiana ny entana alohan'ny andefasana anao soa aman-tsara.
Homena vola ve aho amin'ny fiantohana ny antoka azo itokisana?
Tsia. Amin'ny alàlan'ny serivisy Antoka azo itokisana, ny Watch Rapport dia mandrakotra ny vidin'ny fanamarinana, ary koa ny fandefasana azo antoka mandritra ny roa andro avy amin'ny tranokala mpanamarina ny antoko fahatelo mankany amin'ny mpividy.
Azo atao ve ny mijery ny fiotazam-boalobok'i Guarantee azo itokisana?
Ny famataranandro fiotazam-boaloboka dia azo ekena amin'ny serivisy Antoky ny maha-azo itokiana. Ny famataranandro taloha izay nohamarinin'ny mpiara-miasa amin'ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo dia mety misy faritra fanoloana izay tsy avy amin'ny mpanamboatra tany am-boalohany raha tsy vita intsony io ampahany io ny mpamokatra voalohany. Ny fametahana famantaranandro sy ny famantaranandro maro dia mety tsy mahatohitra rano amin'ny naoty azy ireo tany am-boalohany. Azafady mba manatona mpanao famantaranandro alohan'ny hamoahany rano amin'ny famantaranandro. Ny famantaranandro mekanika dia marefo kokoa noho ny karazana famantaranandro hafa. Mitandrema alohan'ny hanaovana hetsika izay mety hahataitra ny famantaranandro.
Inona no mitranga amin'ny mpanamarina?
Taorian'ny nandraisan'ny mpiara-miasa ny fanamarinana Watch Rapport ny famantaranandro dia nanamafy voalohany ilay entana ilay mpiray antoka ary ireo fitaovana fiantohana dia mifanaraka amin'ny lohateny, ny famaritana ary ny sary. Avy eo izy ireo dia hanao fanaraha-maso fanamarinana fizika marobe. Ary farany, ny marika fiarovana dia hapetaka amin'ny famantaranandro. Ny famantaranandro antitra sy maro ampiasaina dia mety mitaky fikarakarana ataon'ny mpanao famantaranandro iray za-draharaha mba hamerenana amin'ny laoniny ny faharetan'ny fotoana. Ny antoka azo itokisana dia tsy manome antoka.
Iza no manome ny serivisy fanamarinana?
Niara-niasa tamin'ny Watch Rapport ireo manam-pahaizana momba ny indostria manana ny serivisy sy ny fahaizany efa voadinika tsara. Ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fanamarinana dia mpitarika ao amin'ny indostrian'izy ireo, miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro, mpanamboatra marika sy teknisianina manana mari-pahaizana, mampiasa fitaovana teknika avo lenta amin'ny toeram-piasana matihanina.
Haharitra hafiriana ny fizotry ny fanamarinana? Mandra-pahoviana mandra-pahazoako ny entako?
Aorian'ny fividiananao ny entanao dia takiana amin'ny mpivarotra ny handefa ny entana any amin'ny mpiara-miasa amin'ny fanamarinana antoko fahatelo an'ny Rapport, izay hanodinana ny entanao ao anatin'ny roa andro fiasana. Ny fizotry ny fanamarinana ny maha-azo itokiana sy ny fe-potoana dia mety miova arakaraka ny entana sy ny fahasarotana. Vantany vao voamarina tsara ilay entana, dia halefa aminao maimaim-poana miaraka amina fanaterana azo antoka, ao anatin'izany ny fanamafisana sonia.
Handray ny fonosana voalohany amin'ny fividianako ve aho?
Eny, raha nampiditra fonosana tany am-boalohany ny mpivarotra araka ny voalaza ao amin'ny lisitra, dia halefa aminao ny singa rehetra.
Ny serivisy Guarantee azo itokisana ho an'ny famantaranandro ("Antoka azo itokisana" na "Fiantohana azo antoka ho an'ny famantaranandro") dia manery ny serivisy fanamarinana sy fanamarinana ("Serivisy") an'ny antoko fahatelo amin'ny entana amidy amin'ny watchrapport.com. Ireo fepetra sy fepetra momba ny antoka azo itokisana ("Terms") dia mihatra amin'ny serivisy Guarantee azo itokisana ho an'ny famantaranandro sy ny zavatra azo antoka azo antoka amin'ny antsipiriany etsy ambany izay amidy sy vidiana amin'ny watchrapport.com ary mamaritra ny teny izay anoloran'ny Watch Rapport anao hidiranao sy hampiasana ny Serivisy antoka azo itokisana ho an'ny Watches.
Fampiharana amin'ny fampiasana ny Watch Rapport.
Ny teny fampiasan'ny watchrapport.com, ny Politikan'ny tsiambaratelo an'ny Watch Rapport sy ny politika rehetra apetraka amin'ny tranokalanay (miaraka, ary toy izany koa dia azo ovaina indraindray, ny "Politikan'ny Watch Rapport") dia mihatra ankoatr'ireo fepetra ireo. Raha misy ny fifanolanana na ny tsy fitoviana eo amin'ireto Terms sy ny Policikan'ny Watch Rapport ireto dia hofehezina ireo fehezan-teny ireo amin'ny zavatra rehetra resahin'izy ireo mazava. Ho an'ny raharaha rehetra izay tsy noresahina mazava tamin'ireto Terms ireto dia hifehy ny Politika Watch Rapport.
Fampiharana ny antoka amin'ny famerenam-bola an'i Watch Rapport
Ho an'ny entana voamarina, ny fiantohana Watch Rapport Money Back dia mandrakotra ny entana rehetra izay manome fahafaham-po ny fepetra takiana ary tsy voaray na simba tonga. Hahafantatra bebe kokoa momba ny fiantohana ny fiverenan'ny vola Rapport Money Eto.
Famaritana ny serivisy antoka azo itokisana.
Aorian'ny fividianana Item Famaritana tena azo itokiana ao amin'ny watchrapport.com, dia entina any amin'ny mpiara-miasa amin'ny fanamarinana antoko fahatelo voamarina ilay entana mba hijery tsara ny maha-izy azy sy mifanaraka amin'ny antsipirian'ny lisitr'ilay entana. Rehefa nohamafisin'ny mpiara-miasa amin'ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo izy, dia fonosina tsara ary alefa soa aman-tsara any amin'ny mpividy. Raha tsy azo hamarinina ny maha-azo itokiana azy na tsy tena voalaza araka izany ny entana dia averina amin'ny mpivarotra izany ary omena famerenam-bola.
Famaritana ny serivisy.
Ny serivisy dia atolotry ny mpiara-miasa amin'ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo ho an'ny entana azo antoka fa azo itokisana sy natolotra. ("Partner Authentication"). Ny Authentication Partner dia hizaha ny entana amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny logo, ny tag, ny fitaovana, ny fitaovana, ny kalitao, ary bebe kokoa raha azo ampiharina, ary ny fahamendrehana manohitra ny lisitry ny entana; na izany aza, ny Authentication Partner dia tsy hijerena ny famataranandro amin'ny famonoana rano amin'ny famantaranandro na ny maha-marina ny ora ara-potoana. Ny entana dia azo alaina sary amin'ny alàlan'ny Watch Rapport na ireo manana fahazoan-dàlana ho ampahany amin'ny katalaogin'ny sarimihetsika Watch Rapport na amin'ny tanjona hafa, araka ny fahendren'i Watch Rapport irery. Amin'ny alàlan'ny lisitra amidy na fividianana entana azo antoka, azo ekena sy ekenao fa nalefa tany amin'ny Partner Authentication mba hanatanterahana ny serivisy.
Ny saram-pandraharahana momba ny antoka azo antoka.
Ny serivisy dia omena maimaimpoana amin'ny mpivarotra sy mpividy ho an'ny zavatra azo antoka azo antoka fa novidina na amidy amin'ny watchrapport.com; na izany aza, ny Watch Rapport dia manan-jo hanana andrim-panjakana, hanova na hanitsy ny sarany na ny vidiny mifandraika amin'ny serivisy, amin'ny fotoana rehetra, araka ny fiheveran'i Watch Rapport irery.
Ny vokatry ny fahitana hosoka amin'ny mpividy sy ny mpivarotra.
Manaiky ianao ary manaiky fa raha mahita ny hosoka ilay mpanamarina antoko fahatelo na miahiahy fa sandoka ny zavatra iray, dia hesorina tsy hivezivezena eny an-tsena ilay mpividy- na ny mpividy na ny mpivarotra dia tsy hahazo ilay entana; ho fanampin'izay, hiara-hiasa amin'ny tompon'andraikitra araka ny tokony ho izy ny Watch Rapport.
Tsiambaratelo momba ny fiainana manokana.
Watch ny fanangonana ny mombamomba anao manokana Rap Rapport mifandraika amin'ny programa Ghentant Authenticity dia fehezin'ny politikan'ny tsiambaratelo izay mihatra amin'ny fampiasanao ny tranokala watchrapport.com. Mba hahafahan'ny mpiray antoka manamarina manome ny serivisy eo ambanin'ny programa, ny fampahalalana momba ny filaminana, ao anatin'izany, saingy tsy voafetra amin'ny anaranao, adiresy, adiresy mailakao, nomeraon-telefaona, dia omena ny Partner Authentication. Amin'ny alàlan'ny fivarotana na fividianana Item dia mitarika ny Watch Rapport ianao hanome ity fampahalalana vaovao ity amin'ny Partner Authentication, izay mety hampahafantatra an'io fampahalalana io, na izany aza, amin'ny mpiara-miasa aminy, ny mpanome tolotra ary ny antoko fahatelo hafa (toy ny mpitatitra entana sy ny tompon'andraikitra amin'ny fidiram-bola) raha ilaina hanatanterahana ny Serivisy.
Very, simba, na entana tsy natolotra.
Ireo zavatra very na simba nandritra ny fizotran'ny Garanty azo itokiana dia arovan'ny Watch Rapport's Money Back Guarantee.
Fanavaozana ny programa sy fampitsaharana.
Zon'ny Watch Rapport fa tsy adidiny ny manova, manitsy, manolo, mampiato vonjimaika, ary / na mijanona tsy maharitra, ny programa Famaritana ny Fahamarinana, ny anaran'ny Guarantee azo itokisana, ny serivisy rehetra omena eo ambanin'ny programa, endri-javatra, ary / na ny fampiasa atolotra eo ambany fiantohana ny Fahamarinana, ary / na ny mpamatsy tolotra ampiasaina hanomezana ny serivisy rehetra na rehetra amin'ny alàlan'ny Guarantee azo itokisana, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fahalalahany irery, misy na tsy misy fampandrenesana anao.
Watch Rapport dia mety manitsy ireo fepetra ireo, ao anatin'izany ny sarany azo ampiharina, amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fandefasana ireo teny novaina tao amin'ny tranokala Watch Rapport. Afa-tsy izay voalaza any an-kafa, ny teny rehetra nasiam-panitsiana dia manan-kery eo noho eo sy eo ho eo rehefa apetraka amin'ny tranokala Watch Rapport.